KIA , RIO , 2015 , YGN – Super Seven Stars
KIA , RIO , 2015 , YGN
Interior Color Armani Black
KIA RIO ကားသည် Engine power 1.4 L / Gasoline /4Speed Auto Transmission ဖြစ်ပြီး Luxury Grade /5ယောက်စီး ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်…….
Kia Rio သည် Hatchback အမျိုးအစားဖြစ်သောကြောင့် မောင်းနှင်ရာတွင် သွက်လက်ပေါ့ပါးစေပြီး ဆီစားနှုန်းကိုသက်သာစေသည်။
Kia Rio 2015 Model Standard Feature :Leather steering wheel ,Remote central door locking ,15-inch steel wheels,Rear defroster , air-conditioning,atilt-only steering wheel,aheight-adjustable driver seat,a60/40-split-folding rear seat andafour-speaker sound system withaCD player, an auxiliary audio jack,aUSB audio jack and satellite radio power-folding mirrors,rear sensor, sunroof, keyless ignition and entry.
Standard Safety Features: Four Wheel Anti-Lock Disc Brakes and Electronic Stability Control (ESC).
Kia Rio ကားသည် Engine Power 1.4L , Gasoline ,4Speed Automatic Transmission ဖြစ်သည်။ ပျှမ်းမျှ Fuel Consumption 29 mph ဖြစ်သည်။
Kia Rio သည် Multi-functional Steering ကို အသုံးပြုထားသည့်အတွက် မောင်းနှင်မှုကို ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်။ Multi-function Steering Wheel ဖြစ်သောကြောင့် ကားတွင် Hand phone , Tablet များကို Bluetooth ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ သီချင်းများဖွင့်/ပိတ် နိုင်ခြင်း၊Volume အတိုးအလျော့များကို Steering Wheel ပေါ်တွင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ထို့ ပြင် Cruise Control Function များကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Kia Rio Cargo Space သည် 14.9 cubic feet ရှိသောကြောင့် အသုံးအ ဆောင်များ သယ်ဆောင်ရန် လုံလောက်သော အကျယ်အဝန်းဖြစ်သည်။